I-20 / 11 / 2019 | RayHaber | raillynews
Usuku: Novemba 20, 2019
Irmak Zonguldak Line Km: 382 + 300 'uye ngasekunene komgca kwisitayile esivulekileyo kunye nomjelo wokuhambisa amanzi ngenxa yeRepublic yeTurkey State Railways. ICandelo loMlawuli weNkonzo yokuThengwa kweMimandla (i-TCDD) 2 / 2019 [More ...]
Umbutho wabavelisi beNkonzo yeZothutho kunye neLog Logistics UTisticsKAD, kulo nyaka 13. I-Logitrans Fair ebibanjelwe okokuqala kwadibana nabathathi-nxaxheba kwicandelo. I-13-15 UTİKAD ime kwi-fair ehlelwe ngo-Novemba 2019 [More ...]
Imizuzu yeNtlanganiso ye-DHMİ KİK Ipapashiwe
Imizuzu yeNtlanganiso ye-DHMİ KİK epapashiweyo; Ukuqhubela phambili kwiNqaku 4688 kunye nemigaqo enxulumene noko yoMthetho kwiiNdibano zoRhwebo zamaGosa oRhulumente kunye noMthetho wokuHlanganisa ngokuThengiweyo onguNombolo 41; DHMİ ICandelo loMlawuli Jikelele kunye neGosa lezoThutho-uSen kwi-24.10.2019 [More ...]
UMongameli İmamoğlu Uphandwe kwisikhululo seenqwelomoya i-Istanbul
Umongameli we-İBB u-Ekrem İmamoğlu uqaphele kwisikhululo seenqwelomoya i-Istanbul. UImamoglu, odibene nabaphathi be-IGA, wathi, "Sifuna ukulawula inkqubo kwelona nqanaba liphezulu lobudlelwane nalo lonke iziko lase-Istanbul, onke amaziko abonelela ngeenkonzo" [More ...]
USodolophu kaMasipala waseAntalya uMuchtin Böcek, engalibali ootitshala abasebenza e-Antalya, kwi-24 ngoNovemba ngoSuku looTitshala njengesipho ngalo mhla unentsingiselo yokuhamba ngenqwelo moya kukaTünektepe Teleferik. Rhoqo ngonyaka uMasipala wase-Metropolitan [More ...]
U-Eskişehir Road Uya Kuphefumla; UMasipala oMbaxa we-Ankara ubonelela ngezisombululo ezizezinye kwiindawo ezininzi zedolophu ukuze kuthothiswe ukugcwala kwabantu besixeko. Umasipala wase Metropolitan ukhawulezisile ukwakhiwa kweeplass ezintsha kwi-capital; Dumlupinar Boulevard (Indlela ye-Eskisehir) [More ...]
Ukutshintsha kwendlela kwi-Mersin Metro
Indlela iyatshintsha eMersin Metro; Usodolophu kaMasipala wase-Mersin Metropolitan u-Vahap Seecer, ucwangciswe liSebe leSapho labaseTyhini naBantwana kwaye umenywe zii-mukhtars kwiphondo. [More ...]
IProtokholi yoTyelelo lweTaxi enobuhlobo 'iTyikitywe eKayseri
IProtocol yoTyelelo lweTaxi yabaTyelelo 'isayiniwe eKayseri; UMasipala oMbaxa waseKayseri uphantsi kobunkokheli bayo yonke imisebenzi yomsebenzi ngeenjongo zokuba ngumzi wokhenketho eKayseri, urhwebo lokurhweba. I-Erciyes A.Ş., inxaso-mali kaMasipala weMetropolitan; [More ...]
Ukucwangciswa kwetrafikhi yethutyana eDerince
Ukucwangciswa kwetrafikhi yethutyana eDerince; UMasipala oMbaxa waseKocaeli, ISU uzakwenza ngenxa yomsebenzi weziseko zokusebenza eDerince application temporary way. Isicelo esisungulwe ukukhusela abahlali kwiingxaki zokuhamba, i-21 [More ...]
Intuthuzelo Iza Kufika Kwiziqithi zeGulf
Intuthuzelo iza kwi-Gulf Stitution; UMasipala oMbaxa waseKocaeli wenza imisebenzi yokulungisa kuzo zonke iindlela ezisedolophini. Kule meko, amaqela aqhagamshelwe kwiSebe lezeMicimbi yezeNzululwazi, eqinisa indawo kunye nezitalato ezinamagumbi aqhekekileyo kwisithili se-Gulf [More ...]
Iiprojekthi ezenza uBomi buLula eKocaeli Ongoing
Umanyano lukaMasipala waseMarmara kunye no-Kocaeli uSodolophu u-Assoc. Dr. I-Tahir Büyükakın, IHasan Gemici Sports Hall yokungena kwesithili saseKartepe Çuhane esitratweni iya kujika indawo eseleyo yendlela ephindwe kabini eSalim Dervişoğlu [More ...]
Iprojekthi yeTransure yeTransul
Usekela we-AK Party u-Mehmet Ali Cevheri Sanliurfa, UMlawuli-Jikelele we-TC kwi-State Railways Ali Ihsan Uygun utyelele e-ofisini yakhe. Enye yeendlela zokuhamba ezidumileyo kule minyaka idlulileyo, [More ...]
Inkungu echaphazelekileyo kwisikhululo senqwelomoya i-Istanbul, Iinqwelomoya eziHamba ngoMoya imizuzu
Isikhululo seenqwelomoya i-Istanbul sicwangciselwe ukwenza ishishini ngenxa yenkungu, eyayisebenza ngentsasa yangoLwesibini kusasa, iindiza zihamba ixesha elide emoyeni. Ngaphandle kokulibaziseka, zonke iindiza zafika ngokukhuselekileyo kwisikhululo seenqwelomoya. Isikhululo seenqwelomoyaHaber sicatshulwe [More ...]
Iprojekti yeMoto yeCable yaseNemrut ikwi-Ajenda yePalamente
Iprojekti yeCable yemoto eNtabeni ye-Nemrut ikwi-Ajenda yasePalamente; U-Abdurrahman Tutdere, uSekela we-Party ye-People's Party u-Adıyaman, wazisa iprojekthi ye-ropeway ecwangciselwe i-Nemrut kwiKomishini yoCwangciso kunye nohlahlo-lwabiwo mali lweCandelo loMphathiswa Wezenkcubeko Nezokhenketho kunye neAdıyaman Archaeology kunye [More ...]